Nhau - Kuburitswa kwakazara kwezvikamu zvekugadzirisa, simba rakazara rakagadziridzwa zvakanyanya
Yakazara kuburitswa kwekugadzirisa ekugadzirisa, simba rakazara rakagadziriswa zvakanyanya
Kupinda muTangshan yakakwira voltage yemagetsi porcelain insulator kambani, musangano wemishini inodzvova, mutsetse wekugadzira uchizara kushanda. Mumusangano wakanyorova, pakati pezhizha, vashandi vakapfeka maoko mapfupi vakanga vachidikitira nehasha, vachishanda nguva yakawandisa kuti vaite maodha. Kunze kweimba yekuchengetera, chinongedzo chekutakura chakabatikana uye chakarongeka. Sezvo logo yeBBMG inogona kuonekwa kwese kwese mufekitori, tsika yeBBMG ine tsika yekushanda sezvo musimboti wakabatanidzwa mumoyo wevashandi vese.
Panguva iyoyo, BBMG yakanunura yakakwira voltage yemagetsi porcelain insulator kambani padhuze nekubhuroka. Mumakore mana apfuura ekurongwazve, BBMG yakapa yakakwira-voltage yemagetsi porcelain insulator makambani rutsigiro rwakakura maererano nemari, tarenda rekuvaka timu, uye kugadzirisa matambudziko akasara nenhoroondo, zvichiita makambani emagetsi emagetsi emagetsi ekuisa moto Hondo, uchiona yakanakisa shanduko kubva mukubhuroka kuenda kune purofiti.
Iyo mukurumbira wakanaka weBBMG Boka, simba rezvipfuyo zvemunyika uye zvepasirese uye simba rakazara remazana emabhiriyoni emari yakawanikwa yakaita kuti yakakwira magetsi emagetsi porcelain insulator kambani yemhuri hombe yeBBMG Boka ridzore vatengi mushure memakore matanhatu ekunyarara mu musika wezvakanaka post porcelain insulators. Iko kuvimba kwekambani kunozivikanwa zvakanyanya neiyo State Grid musika ine yakakwira yekupinda zvipingaidzo uye zvakakwirira zvinodiwa kune yekambani mukurumbira uye chigadzirwa chigadzirwa. Muna Kukadzi 2018, iyo yakakwira voltage yemagetsi porcelain insulator kambani yakahwina mubairo weHurumende Grid Direct Kuunganidza Zhangbei Flexible DC Project, yekutanga purojekiti yekuratidzira kiyi yepamba. Iyo State Grid Pass inomiririra yakakwira voltage yemagetsi porcelain insulator kambani chinzvimbo mune yakatwasuka ikhoramu porcelain indasitiri yakagadziridzwa. Mune 2022 Nguva yechando maOlimpiki anoshanduka DC chirongwa, iko kudyiwa kwemagetsi emagetsi emagetsi epasisitiri makambani anoita makumi mashanu muzana. Kubva pakagadzwa iyo yakakwira voltage yemagetsi porcelain insulator fekitori, iyo State Grid yakahwina nyowani yepamusoro bhidha. Iyo grid yenyika yakamisikidza kutanga muindasitiri, uye mari yekutengesa yakawedzera ne102% gore-ne-gore. Electric Porcelain insulator Kambani yakatangazve mbiru zvedongo insulator musika iyo yakanga yavhiringidzwa kwemakore mazhinji, uye mari yayo yekutengesa yakawedzera ne 70% gore-ne-gore. Kubva muna Gumiguru 2019, iyo yakakwira voltage yemagetsi porcelain insulator kambani yakadzorera zvizere vatengi vese mumisika mikuru mitatu yemunyika grid musika, switch switch musika, uye musika wekunze.
Iyo yakagadziriswazve yakakwira voltage yemagetsi porcelain insulator kambani, kuitira kuti ivandudze iwo mashandiro uye kuvandudza kukwikwidza kwemusika, kwakasimbisa manejimendi ekuedza mukuderedza mutengo uye kuwedzera kushanda. Mukuita dhizaini yekuvandudza, wedzera mashandisirwo eiyo huni, kupfupisa nguva yekupfura uye kudzikisa kushandiswa kwegesi; mukugadzirwa kwezvinhu zvesimbi, chinja simbi isina simbi nealuminium zvinhu kudzikisa mutengo wekutenga. Parizvino, iyo mamirioni matatu yakatwasuka yekoramu porcelains yakaiswa mumusika zvese zvakachengeteka kumhanya nezero tsaona. Parizvino, kugona kwekugadzira kweakakwira voltage yemagetsi porcelain insulator kambani inoteedzera yechipiri munyika, maitiro ekugadzira ari munzvimbo inotungamira muindasitiri, mhando yezvigadzirwa iri mumatatu epamusoro munyika, uye kukwikwidza kwemusika uye brand pesvedzero inoramba ichiwedzera.
Post nguva: Jul-10-2020